Lawula amaxesha amaninzi eWindowsPress ngeManaWWP | Martech Zone
NgoMvulo, nge-21 kaJanuwari, 2013 Douglas Karr
Sityikitye ngokwenyani abathengi be-WordPress abangama-3 kule veki iphelileyo kwaye ibango liyaqhubeka nokukhula. Njengoko siqhubeka nokulawula nokubeka esweni iisayithi zabaxumi bethu, lixesha lokuba siqale ukukhangela inkqubo yokunceda ukuba isebenze ngakumbi. LawulaWP Ikhonkco lolawulo lweWordPress ebandakanya bonke enika abasebenzisi amandla apheleleyo kunye nolawulo olupheleleyo ekulawuleni phantse naliphi na inani leendawo zeWordPress ngendlela elula.
Lawula Iimpawu zeWP
Unqakrazo olunye Ukufikelela -Ukufikelela kunqakrazo olunye lokulawula zonke iisayithi zakho zeWindowsPress.
Ulawulo olulula -Ukujonga kwakhona ukuba zeziphi iisayithi zeWordPress ezinemixholo kunye neeplagi ezifuna ingqalelo. Unqakrazo olunye, zonke iiplagi zakho kunye nemixholo zihlaziywa.
Ukujonga iliso - Ngezixhobo zokubeka iliso kwi-premium, uya kuqinisekisa ukuba iiWebhusayithi zakho ze-WordPress ziya kuqhubeka nokusebenza kakuhle ukuze ishishini lakho liqhubeke nokusebenza ngokuzeleyo. Kodwa ukuba kukho into engahambanga kakuhle, uya kuba ngowokuqala ukwazi.
Izilumkiso zendlela -Ngaba kukho umntu othile odumileyo oqhagamshele nawe? Ngaba iposti yakho yamva nje ihambile yintsholongwane? Ngaba indawo yakho ihlaselwa zi-spam bots? Ngesixhobo esinamandla sokulumkisa, uya kuba nakho ukubeka esweni ii-spikes zendlela. Ngoku ungaqiniseka ukuba usebenzisa amathuba amahle.
Uhlalutyo lwe-SEO -Kutheni usebenzisa imali kwiiphakheji ze-SEO ezibizayo? Sibandakanya izixhobo ezinamandla zohlalutyo lwe-SEO ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo. Sebenzisa olu lwazi ukuze wazi ukuba umi phi, kwaye ulusebenzise ukuphucula ubungakanani beenjini zakho zokukhangela.
google Analytics -Ukungena ekusebenzeni kweendawo zakho kuyimpepho ngokudityaniswa kukaGoogle. Lonke ulwazi olubalulekileyo olufunekayo ukuze wenze izigqibo ezinolwazi malunga nokuba zeziphi iindlela eziza kuthathwa ziziza zakho ze-WordPress zihlala zikhona kuwe
tags: lawula i-wordpressWordPress
NgoJanuwari 21, 2013 ngo-5:00 PM
NgoMvulo omnandi kuwe!
Ndiyayithanda impelaveki yeentsuku ezintathu-kwaye ndifumana ufundo lwebhlog.
Ndiyathemba ukuba oku kukufumana usenza kakuhle kakhulu kwaye ngethemba ukonwabela ukuphumla kunye nokukhanya kwelanga!
Ciao ciao okwangoku ~
PS Khumbula, IVEKI YOLUTSHA iqala nge-1 kaFebhruwari kwaye izipho eziphiwayo ZINKULU kunye nezithuba ezibhaliweyo zabaselula!